Sei kusarudza Monitor?
imi muri pano: musha Tips Sei kusarudza Monitor?
Munyika yanhasi, nhamo, Kazhinji vane nzira dzakasiyana-siyana kuti uzvidzivirire uye nevadiwa vako kubva zvisingakoshi mwaranzi. Asi zviri zvikuru zvakaoma, nekuti nemwaranzi aya asingaoneki uye imperceptible. Kuvapo uye basa mumhuri mumamiriro ezvinhu anogona chete uyere veimba dosimeter.
On ngozi dzoutano, izvo zvinogona kutarisana kakawanda vari munzvimbo dzakakwirira mwaranzi, kutya kutaura. Naizvozvo zviri nani kuti uzvidzivirire uye kudzivirira mhuri yako pairi.
Dosimeter musha - zano nokururamisira nyore, Powered by Geiger pakaunda. It anoyera mhepo kumashure nemwaranzi, zvinogadzirwa, nyaya dzakasiyana. date yake zvikuru zvakarurama, asi kurishandisa kumba zvakakwana. uyezve, zviri nyore kunzwisisa murume-munhuwo zvake.
Zvamunofanira kuteerera, ainhonga mhuri dosimeter?
Unofanira kuva pachena, Kushandisa mudziyo.
Ona nhamba uye marudzi sensors. It kunobva zano wanda.
The chigadzirwa inofanira pamwe yakakodzera chitupa yepamusoro.
Parachuti inofanira kuva chiine kureruke, saka unogona kutora navo pasina matambudziko.
Available Opsioneel mabasa, izvo zvichaita gadzirisa nokuyerwa.
Dosimeter musha uri nyore chaizvo kuti ishande, zviri nyore kudzidza kushandisa.
teererai, rinogona kushandiswa zvinangwa zvakadaro:
Kuyerwa nechokumashure nemwaranzi mukamuri kana mumugwagwa;
pokutarira Kuwanikwa mwaranzi inokuvadza nezvinhu zvokudya;
tarisa kuti mwaranzi inokuvadza mwaranzi chero chinhu.
pamberi, wotanga tsvakurudzo, Tinofanira kuyeuka, kuti hunhu ruripo dzinongoitika kumashure nemwaranzi, riri zvakakodzera uye hazvikuvadzi utano. Asi ayo zvakawandisa kunogona kutakura migumisiro dzakaoma.
Kuongorora padanho radioactivity kushandisa mhuri dosimeter, fanira:
Batidza mudziyo. Itangezve ari dose kuongorora vatsva, kana zvakakodzera.
Kana uchida kuongorora noruvazhe (mugwagwa, dare, chero nzvimbo), tevera, zvokuti mudziyo haina kusvibiswa. Kana bvunzo nzvimbo - mumba, kunodzidza kutsvakurudza vanoverengeka yayo yenzvimbo - pedyo kumasvingo, nechepakati, pasirin'i.
Kana uchida kuongorora chinhu kana chikafu ane chigadzirwa, Bata mudziyo sezvo pedyo sezvinobvira nawo. Unogona aite nezviyero izvi zvakananga kuchitoro kana kutengeswa, pamberi zvinobvira kutenga: zviri kutsanya uye zviri zvikuru nyore.
chinhu chiduku chakadai muchava chinokosha mubatsiri.
Has akadzivirirwa utano hwavo uye vadiwa vavo.
Vakadzi kugerwa – sei kusarudza?